Abapheki AbaseBrithani Abangu-7 Okufanele Ubazi - Izindaba
Abapheki AbaseBrithani Abangama-7 (Abangasibo uGordon Ramsay noma uJamie Oliver) Ngubani Okufanele Abe Kwi-Radar Yakho
7 British Chefs Who Aren T Gordon Ramsay
Ukudla kwaseBrithani kutholwa kabi (izitsha ezifana ne- dick enamabala futhi ama-jellied eels ungasizi). Kodwa ngenxa yabapheki abathile abadumile nombukiso othile we-TV owaziwayo (uma ungakaboni Umbukiso Omkhulu Wokubhaka waseBrithani, ke ngicela wenze kanjalo ngokushesha), sithola ukwaziswa okusha ngokuphelele ngokudla kwaseBrithani. Lapha, abapheki abayisikhombisa abaphezulu kakhulu okufanelekile ukubazi.
OKUSHIWO: Abapheki Abali-12 Bembula Isithako Esifanele Okufanele Uhlale Unaso Ekhishini Lakho
UChristina Solomons / uHarper Collins
Angakhuluma kahle futhi abe nomnene, kodwa UNigel Slater zokupheka zipakisha i-punch enambitheka. Imifino egqoke amakhambi amasha futhi yethulwe kalula imvamisa iyizinkanyezi zohlelo lwakhe. (Cabanga: U-anyanisi obhakwe ngeParmesan nokhilimu futhi ukungabaza isitshalo seqanda Thola okwengeziwe ngombhali owaziwayo wokudla nothando lobuntu be-TV lokupheka ngokubuka Ubhontshisi , ifilimu efakwe ku-2010 ekhuluma ngobuntwana bakhe futhi edlala indawo ka-Helena Bonham Carter njengondabamlonyeni wakhe omubi.
UFrancesca Yorke / Getty Izithombe
U-Sultry futhi uzifundisile (uzibiza ngompheki wasekhaya, hhayi umpheki), uLawson ungumuntu ojwayelene naye Inethiwekhi Yezokudla abalandeli, kepha ubepheka isiphepho ezweni lakubo lase-U.K kusukela ngeminyaka yama-90s. Uyaziwa ngezindlela zakhe zokupheka ezilula, zansuku zonke ezingashaywa ngesikhathi esincanyana kunokuba kudinge uku-oda ukuthatha. ULawson ufakazela ukuthi ukudla kunjalo ngakho-ke okungaphezulu nje kukaphethiloli njengoba ethatha ababukeli bakhe ohambweni lokuhlola ngezinzwa (futhi kaningi ezungeze i-Italy, lapho ethola khona ugqozi olukhulu).
Anthony Harvey / Getty Izithombe
Ngaphezulu kweminyaka engama-60 yesipiliyoni, uMary Berry (aka 'Bezza') usifanele isiqu sakhe, iNdlovukazi yamaKhekhe. Udume kakhulu ngamakhekhe akhe angenaziqholo njengoba engenza izinkulumo zakhe ezihlekisayo (nangengozi) Umbukiso Omkhulu Wokubhaka waseBrithani . Siyamthanda ngesimo sakhe sengqondo sokuzikhukhumeza, amajakhethi amabhomu ezimbali, ukubenyezela okubi esweni lakhe nokungabi nasici Victoria isipanji . Kulabo abangakayijabuleli intokozo yakhe, empeleni ungugogo ohlale ufisa ukuba naye.
I-WPA Pool / Getty Izithombe
Umpheki oyingxenye, ingxenye yososayensi osangene, uBlumenthal ungenye yezinkanyezi ezinkulu kakhulu endaweni yonke yamangqamuzana e-gastronomy. Idume ngokuvuselela izitsha zendabuko kanye nokuzama izithako ( iphalishi lomnenke , noma ubani?), Umpheki we-quirky unezindawo zokudlela ezintathu zezinkanyezi ze-Michelin egameni lakhe (kufaka phakathi indawo yokudlela ephambili emhlabeni, Idada Elinonile ). Impela, izitsha zakhe akulula neze ukuziphinda ekhaya (ngaphandle kokuthi kwenzeke ukuthi ube ne-nitrogen ewuketshezi elele nxazonke), kepha okungajwayelekile kwakhe Indawo yokudlela yaseLondon kufanelekile ukuvakashelwa uma uhambela phesheya.
I-Fairfax Media / Getty Izithombe
Ngombukiso wakhe, Ikhishi Elincane laseParis , Khoo kufakazela ukuthi kungenzeka ukushaya izindlela zokupheka zaseFrance ezinamanzi, nge-twist yaseBrithani, emakhishini amancane kakhulu (konke ngenkathi kugqokwa izingubo zokuvuna nezindebe ezibomvu, natch). Izitsha ezihlwabusayo, njenge-ratatouille enomuthi kanye ne-Gruy re cobbler kanye ne-mini anyanisi tartes tatin, kuhlanganiswe nokuqhuma okuhle kwezimakethe zabalimi bendawo kuzokwenza ufune ukupakisha izikhwama zakho uthuthele eFrance khona manje. Cabanga Am lie kepha ngama-baguette amaningi . Yiba nesifiso esihle sokudla.
Tim Roney / Getty Izithombe
Uma izintandokazi zomndeni wasekhaya ziyinto yakho, khona-ke hlola umfana omuhle kakhulu nobuntu be-TV uJames Martin. Waziwa kakhulu ngokusingathwa kombukiso wokupheka obukhoma masonto onke (owawusakazwa iminyaka eyishumi ehlaba umxhwele), uMartin umayelana nokusebenzisa izithako zasendaweni ukudala ezakudala zaseBrithani i-toffee pudding enamathele futhi Uphudingi waseYorkshire (aka savory popovers). Unentshisekelo efanayo ngokupheka njengoba ethanda ngezimoto ezisheshayo nezakhe izinja —URalph, Cooper noPablo — abathandekayo ngokwanele ukuba bangadla!
Chris Jackson / Getty Izithombe
Yisho okufunayo ngokupheka kwaseBrithani kanye nezwe elithandiwe lophaya benyama kanye notshani obumnandi, kodwa izandla phansi, ayikho indlela engcono yokulungisa futhi kamuva uzitike ngokudla okulungile kwenkantini. Futhi akekho owazi ama-Classics (izinhlanzi nama-chips, ama-burger nama-pie) kangcono kunoTom Kerridge ojabule ngokuhlekisa, okuwukuphela kompheki wase-UK ukuqhuba inkantini enezinkanyezi ezimbili zeMicrosoft. Zama ukwenza ezinye zokupheka azithandayo ekhaya ngokubheka eyodwa yakhe izincwadi zokupheka ezithengwa kakhulu noma umbone esakaza uthando lwakhe lwe- #properlush (lokho kusho ukuthi kumnandi kakhulu) ku Twitter .
OKUhlobene : Izindawo ezi-6 ezihamba phambili zezinhlanzi nama-Chips eLondon
izingcaphuno ezihlekisayo zomshado
amakhambi asekhaya okukhulisa ivolumu yezinwele
ikhambi lasekhaya lokukhulisa izinwele
ungasusa kanjani isilevu unomphela
ikhambi elihle kakhulu lasekhaya lokumisa ukuwa kwezinwele
amabhayisikobho amahle kakhulu omlando